ATN: February 2008
မမှောင်ခင်ကလေး ဆည်းဆာကို ချစ်တယ်၊
`ပီကာဆို ချိုးငှက်`ကို ချစ်တယ်။
`နှင်းဆီဖြူရဲ့ အဝေးကလူတယောက်`ကို ချစ်တယ်။
သံသယ တခုတခု ရှိမှုအတွက်
ထောင်ဒဏ် ဆယ့်လေးနှစ် စီရင်ချက်နဲ့
ဘ၀က ရွေးချယ်စရာမရှိ ၊
သူ့ အိုးနဲ့ 
သူ့ ဆန် အတိ၊
ဖြစ်လာဦးမလားလို့ လေ...။ ။
( ဒီခေတ်ကြီးကိုက )
ဆိုးပါတယ် ၊ ဆိုးပါတယ်
ဘယ်လောက် ဆိုးနေလဲ ? ၊ တချို့က စပ်စုလိမ့်မယ်
မသိတော့ဘူး ညီမလေးရေ ၊
ဆိုးပါတယ် ၊ ဆိုးနေတယ် ....
သံဃာမှန်း မသိ..တဲ့ ခေတ်ကြီး ။
( မိစ္ဆာတွေ မီးကုန်ယမ်းကုန်
ရမ်းကားနေတဲ့ ခေတ်ကြီး )
မကိုးကွယ် မယုံကြည် ။
- မှင်သေသေနဲ့ ပဲ
ရိုသေလေးစားချင်ဟန် ဆောင် ၊
( ဖဲသုံးချပ်လောင်းကစားလို )
- သူတို့ က ( မျက်နှာပြောင်နဲ့)
ဘုန်းကြီး အတု...တဲ့ ၊
ဆိုးပါတယ် ၊ ဆိုးပါတယ်ကွယ် ။
တရားဆိုတဲ့ ဓမ္မက ဆိတ်သုဉ်း...
( မတရားမှု )
တောဥပဒေတွေကြီးဆိုး ( စိုး) ပြီး ၊
ဘာမှစဉ်းစား ( တွေးတော)မနေနဲ့ 
ရေတွက်မရ အပျက်တွေနဲ့ 
ဖြေသိမ့်မရ အချက်တွေကြောင့် ၊
" သံသရာဟာ တပတ်လည်နေသတဲ့ "
ဓမ္မနဲ့ အဓမ္မ တိုက်ပွဲမှာ ၊
မကြာမှီ... လာမည်... မျှော်
ဆိးုပါတယ် ၊ ဆိုးပါတယ်
- ဒုက္ခသည်ရဲ့`ဒုက္ခသည်` ...တဲ့
( ဘုန်းတန်ခိုးလက်ရုံးညံ့လိုက်ပုံက )
ဘယ်လိုသဘောထားမလဲ ? ၊
ကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ ကိုယ် ။
အပေး - အကျွေး-အထား- အနေ
( U. N.H.C.R ) ရေ့ 
နေ၀င်- မိုးချုပ် ၊
- ဒုက္ခသည်ရဲ့ `ဒုက္ခသည်`...များပေါ့
( ကျို့ကြားကျို့ကြား )
( ဘယ်လိုလုပ်မလဲလေ ) ။
- `ABCD ,
( ကြေညာချက်များ )
ဖတ်ရှုပေးခဲ့ရတာရှိ ( သို့ သော် )
ရိတ်သိမ်းရခွင့်လည်း မရှိ ။
မမြင်တွေ့ ရတဲ့ မိုင်းတွေကြောင့် ၊
ဒီလေကို ရှူရှိုက်ဖို့ 
တေးကဗျာ မဖွဲ့ မနွဲ့ ဖြစ်ကြ ၊
( ကိုယ့်ဖာသာ )
( နှစ်ဝမ်း သုံးဝမ်းမ၀ခဲ့ )
အိပ်မက်ကို မက်ပျော်ယင်းနဲ့ ။ ။
နေ၀င်- နေထွက် ၊ မနေ့ ကနည်းတူ နေ့ ရက်
နေမထိ ၊ ထိုင်မသာ။
အေးချမ်း- ဖွံ့ ဖြိုး- သာယာ စသော နားကလောစရာမရှိ
( အေး ) တောင်ယာလည်းမရှိ
- မြေမြှုပ်မိုင်း မရှိပေမယ့်
ဒီမြေပေါ်မှာ ကြာကြာ မနင်းချင်ဘူး
( တ၀မ်းတော့ဝပါရဲ့)
အသနားခံဘ၀မျိုးနဲ့။
- ဒီလို ညီမလေးရေ...
ညီမလေးရော ဖတ်ဖူးရဲ့လားမသိ ။
သူရဲကောင်း လဂွန်းအိမ် အကြောင်း
ပြန်အန်ထုတ်ဖို့ အတွက် ၊
သောက်စို့ နေတဲ့...ငါတို့ 
ရဲဘော်ကြီးတို့ ရေ ၊
ချီတက်ကြပါစို့ ရဲ့။ ။
ပို့စ်အသစ် မတင်နိုင်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော် နှစ်သက်ခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးတွေကို ဝေမျှချင်လို့ပါ။ ဆရာ နှင်းခါးမိုးရဲ့ မောင့်မဟာဂီတသူမ-ကတော့ ကျနော့်ကို အသည်းကွဲသွားစေခဲ့တယ်။ ဒီကဗျာကို ဖတ်ရပြီးတော့ သူ့ပို့စ်မှာ ကျနော် ကွန်မန့်ပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ကျနော်က ဇော်ဂျီ-ဖွန့်ကို မသုံးတတ်သေးဘူး။ ဘိုလိုပဲ ကွန်မန့် ပေးခဲ့တယ်။ Out of words, I'm heart broken. လို့။ ခံစားကြည့်ကြပါဦး၊
စီးကရက် ဗူးခွံ ပေါ်
ခြေထောက် တဖက် တင်၊
စာတိုက်သေတ္တာနံပတ် - ၁၃၊
ရှေး ခေတ်ဟောင်း အမွေ။
စာအုပ်တအုပ် အချပ်ပို ထည့်ပေး၊
နတ်မြင်းပျံ စီးရင်း အမောဆို့ ။
မသေခင် အကြွေး တင်
ရှုခင်းကရယ် ( ရီ ) ရွှင်စရာ။
အသဲကျွမ်းမတတ် ချစ်။ ။
သမိုင်းဦး ရုပ်ကြွင်းနဲ့ 
ကမ္ဘာ့ ချောင်ကြိုချောင်ကြား...
မတို့ မထိပဲ ထား၊
လူကြီးမင်းတို့ ချစ်ချင်းမေတ္တာ ။ ။
ဆရာ မာန်းရှာ သို့ 
from Golden Colour Revolution by Moethee Zun
မြေပြန် နဲ့ တောင်ပေါ်ကို ဆက်သွယ်ပေးခဲ့တဲ့ ချစ်ကြည်ရေး တံတားကြီး အချိုးခံရတာပဲ။ အင်မတန် ကြေကွဲဖို့ကောင်းတယ်။ ဖဒိုမာန်းရှားကို သတ်တာဘယ်သူလည်း ကျနော်မသိသေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဘာကြောင့် အသတ်ခံရ တာလည်း ဆိုတာတော့သိတယ်။ မာန်းရှာဟာ ပြည်ထောင်စုသားတိုင်းရင်းသားတွေ လိုအင်ဆန္ဒကို ထုတ်ဖေါ် ပေးခဲ့လို့ ပဲ။
ဆရာနှင်းခါးမိုး ပြောပြောနေတဲ့ မိုး သုံးမိုး-ထဲက တယောက်ဖြစ်တဲ့ ဆရာ ထက်မိုးရဲ. ကဗျာတပုဒ်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ မွေးမြေ-လို. အမည်ရပါတယ်။
ဆရာထက်မိုးနဲ. ကျနော်က လူချင်းမတွေ.ခဲ့ဘူးပေမယ့် စာချင်း ရင်းနှီးခဲ့ကြပါတယ်၊ အထူးသဖြင့် ကယားပြည်နယ်ထဲမှာ သူအလုပ်တွေ လုပ်နေခဲ့စဉ်အခါကပေါ့....။
အခုကော အကောင်းတိုင်း ရှိသေးရဲ.လား မသိ။
ရှစ်လေးလုံး မဖြစ်ခင်က လက်ဘက်ရည်ခွက်များ
လေဘာ ကဒ်ပြား၊ ဘတ်စ်ကားအို...
ငါတို့ မြို.ရဲ. လွမ်းစရာ ကုက္ကိုပင်တွေ။
အလံများ၊ ကြွေးကြော်သံများ၊ သေနတ်သံများ
" မျိုးသန်းထွဋ် " ...ရေ
လွင့်ပါးသွားတဲ့ တိမ်၊ ခုချိန်ထိ သိမ်းထားခဲ့သူ။ ။
ပန်းရိုးမတင်းကုတ်= ထက်မိုးတို့ အိမ်ဘေးက...တဲလေး
" မျိုးသန်းထွဋ် "= ကိုမိုးသီးဇွန် နံမည်ရင်း
သူမ ရောက်လာ ....
ခွင့်ပြုချက် ရရ မရရ
ချစ်တဲ့သူ နှင်းရေ ....
နှစ်ကိုယ်တူ ... ....
ရဲရဲတင်းတင်း လျှောက်ကြရာဝယ် ... ...
လျှာ ပေါက်တဲ့အခါ ပေါက်၊
သွား ပဲ့တဲ့အခါ ပဲ့၊
နင် ဟဲ့ .... ငါ ဟဲ့ ...
အော်တဲ့အခါ အော် ...
ငါ ချစ်တာ နင် မသိဘူး ...
နင် ချစ်တာ ငါ မသိဘူး ...
ရင် မချိအောင် ကြေကွဲလို ကြေကွဲ ....
ကျနော်ဆိုးခဲ့သမျှကို အမျိုးမျိုး အနွံအတာခံရင်း ဘ၀ခရီးမှာ တစမငြည်းစွာ ကျနော့်ကို ချစ်လာခဲ့တဲ့ ကျနော့် ဇနီးသည်ကို ဆယ်နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ်မှာ ပေးခဲ့တဲ့ လက်ဆောင်ပါ၊
မွန်ပြည်နယ် တောင်ပိုင်းဒေသမှာ ထုတ်ခဲ့တဲ့ စာစောင်တခုမှာ ဖော်ပြခဲ့ဖူးပါတယ်၊ နှစ်တော့ မမှတ်မိတော့ပါ။
`အောင်ပွဲဆက်ဆက်ခံဦးမည်`ဆိုတာ ကိုလေးညွန်.ရေးခဲ့ပြီး ဗကသများအဖွဲ.ချုပ်က ဗကသသီချင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားသီချင်းပါ။
မာန်ဝင့်တဲ့ ဦးခေါင်း တသီတတန်း -
အထပ်ထပ် တင်းလို. ...
ဆူပူကျိန်ဆဲ ရွံမုန်းလို. ...
မောပမ်းခြင်းတွေကို မှုတ်ထုတ်လို. ...
အမှန်တရားက သင်တို. နှလုံးသား၊
သင်တို. အားက ပြည်သူလူထု၊
ဒေါင်းအိုးဝေမှာ ဖော်ပြခဲ့ဖူးပါတယ်၊ ၁၉၉၃ လို.ထင်ပါရဲ.။